Biti recounts dramatic escape to Zambia - iHarare News
Biti recounts dramatic escape to Zambia
By Sharon Chirisa	 On Aug 10, 2018
Biti recounts dramatic escape
MDC Alliance principal Tendai Biti recounted before a Harare court on Friday all the details surrounding his dramatic escape to Zambia shortly before being returned to Zimbabwe.
Biti was returned to Zimbabwe by Zambian authorities after the Lusaka government denied his asylum application and also ignored a local court order barring his deportation.
Biti is being charged with contravening the Electoral Act after he allegedly declared MDC Alliance leader Nelson Chamisa winner of the presidential vote in the July 30 elections and inciting public violence among other charges.
At the Zambian border Biti claimed he was captured by suspected Zimbabwean authorities who refused to identify themselves.
A tug of war ensued between the Zimbabwean and the Zambian authorities which saw Biti granted a temporary stay at the Zambian police station where he claims he had to sleep in the toilet afraid of Zimbabwe security agents.
Meanwhile Biti is challenging his arrest, arguing that he was unlawfully returned to Zimbabwe in violation of international immigration law.
ED’s Inauguration postponed as Chamisa files challenge last minute